Semalt Expert - Chii Chinonzi Web Scraping?
Kuverenga zvinyorwa (kana web scraping) ndiyo nzira iyo kombiyuta yako purogiramu kana chiridzwa ichabvisa doro rinobatsira kubva kubhulogi yako kana kuti nzvimbo kuitira kuti ishandiswe pasina, kune zvimwe zvinangwa. Kune vanhu vakasiyana-siyana, kuchema kwezwi kunotyisa asi zvishandiso zvekuchera zvinoshandisa nhamba yakawanda yezvivako zuva rega uye zvinogona kukubatsira kutora data inobatsira kubva pamamwe mapeji ewebhu pasina nguva. Zvinotora mashomanana mashomanana chete webhutori hwekutsvaga webhusaiti, kuziva, uye kuronga mapeji ewebhu uye kutarisana nemabhuku makuru. Asi kune dzimwe nzira dzakananga dzokuita kuti uve nechokwadi chokuti iwe unoshandisa zvakanakisisa webhandisi yako yekurasa zvishandiso. Nezvenzira idzi, unogona kutarisana nemavhidhiyo, magwaro, mifananidzo, mafirimu, mavhidhiyo, memes uye infographics pasina chinetso uye unogona kuchengetedza zvinhu zvose pafoni yako pakombiyuta zvakanaka.
Tsvaga Engine Optimization (SEO):
Migwagwa inouya panzvimbo kana blog inogona kubva kune dzimwe nzira, , kubhadhara mutengesi, nhepfenyuro yevhidhiyo, kutumira, uye emails. Zvakakosha kuvandudza kushanda kwewebsite yako ne SEO uye kuderedza kusvibiswa kwaro kusvika pane imwe. Paunoshora nzvimbo yako ne web web scraping tool, iwe uchakwanisa kuongorora kana kupfuura nemafaira anorehwa nebhizimusi rako rekutsvaga..Nenzira iyi, iwe uchakwanisa kuronga zvinhu zvinokosha mune imwe nzvimbo uye zvinhu zvisina kukodzera kune imwe nzvimbo. Kunyanya, zvichatibatsira kuvandudza kutsvaga injini yekutsvaga kwewebsite yako sezvo zvarinenge zvichange zvichishanda uye nemashoko akawanda anokosha.
Vose mabhizinesi vanoziva kuti kutsvakurudza kwemusika chinhu chinokosha chekubudirira kwavo. Kana iwe uri kuda kutanga, kuchinja kana kuwedzera bhizinesi rako, unofanira kuita tsvakurudzo yakanaka yemusika pamusoro pezvinonyanya kunaka zvekushandisa zvishandiso zvewebhu, kuve nechokwadi kuti unogona kuronga zvose zviri zviviri zvinokosha uye zvisingave zvinokosha maererano nezvinodiwa nevatengi vako. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti kune hukama hwakasimba pakati pekutsvakurudza kwemakemikari nekushanda kwekushandisa kwekutsvaga webhutori sezvo vose vari vaviri vachishanda pamwe nechekuwedzera kwebhizimisi rako kukura.
Kungofanana nekutsvakurudza kwemusika, kutora mitsara kunokosha kukura bhizinesi paIndaneti. Zvichienderana nechitarisiko chenyu, mutungamiri anogona kukuwana iwe ruzivo rwakakosha uye nhaurwa yekukurukura yevangangodaro vatengi. Zvimwe zvakasiyana-siyana zvekutsvaga mapurogiramu zvinogona kukubatsira kuronga zvinhu zvako uye kuwana pfungwa yemhando ipi yemitungamiri inofanira kubudiswa kwebhizimisi rinobudirira uye rine zvibereko kune internet.
Kuongorora uye Kufunga:
Unofanirwa kusarudza kupora kubva kuYelp, TripAdvisor, Zomato, Google, Trustpilot, Amazon, nzvimbo kuti uwane pfungwa yekuti vatengi vako vanogutsikana nemishonga yako uye mazano kana kwete. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kutendeukira kumasidhijhi ezvesuzhinji uye tsvaga marongerwo uye michina nemazita kuti uve nemafungiro emhando ipi yetsamba yavakatsvaira paIndaneti. Kuongororwa kwakakodzana uye mapurogiramu emabhizimisi ekutsvaga kuchakupa maonero ekuti ungaenderera sei nebhizimisi rako. Ichakupawo ruzivo rwekukwikwidza kwekukwikwidzana uye simba kuitira kuti iwe ugone kutora matanho maererano nekodzero yako yekuziva Source .